Golaha SMT PCB - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Golaha SMT PCB - PCBFuture
Ereyga furaha: Golaha SMT, nooca PCBA, isku imaatinka SMT PCB, PCB SMT
Xirfad ahaan soo saaraha shirkii PCB, oo waxaan ku haysannaa in ka badan toban sano shirkii SMT PCB. Waxaa naga go'an inaan la kulanno baahiyaha macaamiisheenna oo ka kala socda warshado kala duwan xagga tayada, gaarsiinta, kharash-ku-oolnimada iyo xalka PCB. Sidoo kale bixi adeeg khaas ah oo gaar ah. Waxaan u qaabeynaa PCB miisaaniyadaada iyo inaan waqtigaaga kuu ilaalino si aad suuqa u kasbato.
Maxaad u dooratay golahayaga SMT PCB?
Qiimaha 1.24-saac ee khadka tooska ah.
2. Degdeg ah adeeg 12-saacadood ah oo loogu talagalay nooca PCB.
3. Qiimo jaban oo tartan ah.
4. Imtixaanka shaqada ee ku saleysan shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha.
5. Kooxdayada xirfadeed iyo kalsoonida leh waxay kuu fududeyneysaa inaad dejiso ama xalliso dhibaatooyinka. Tani waa waxa aan dooneyno inaan ku qancino macaamiisheenna. Waxaan bixinaa adeegyo buuxa oo ah naqshadaynta wareegga illaa aaladaha dhammeeya ee looxyada daabacan. Waxaan marwalba ku faraxsanahay inaan ku siino adeegyo heer-koowaad ah.
6. 10 sano oo waayo-aragnimo ah qaybta iibsiga Qalabka Elektaroniga.
7. Waxaan si toos ah oo dhaqso ah ugu soo gaarsiineynaa PCB-yadaada kadib marka aan ka dhameysano warshada.
8. Warshad SMT lagu kalsoonaan karo oo leh 8 Khadadka SMT, 100% Tijaabooyinka Shaqada, Soosaarida Noocyada, Xallinta Waxtarka Leh.
Waan bixin karnaa?
1.Golaha nooc PCB
Shirkii PCB-dhinac-laba geesood ah
Shirkii PCB-lakabka badan
Shirkii PCB aluminium
Shirkii PCB debecsan
6. Isku soo wada duub PCB dhaqso
Shirka PCB-ka ee 'turkey'
8. SMT stencil ka samaysan bir loogu talagalay daabacaadda dhejiska dhejiska ee laydhka lagu jaro.
Nidaamka SMT PCB Assembly:
Nidaamka loo adeegsanayo SMT si loo soo saaro aaladaha PCB waxaa ka mid ah isticmaalka mashiinnada otomaatiga ah si loo soo ururiyo qaybaha elektarooniga ah. Mashiinkaan wuxuu walxahaas dul dhigayaa guddiga wareegga, laakiin kahor taas, faylka PCB waa in la hubiyaa si loo xaqiijiyo inaysan wax dhibaato ah ku qabin wax soo saarka iyo shaqeynta qalabka. Kadib markaan xaqiijiyo in waxwalba ay qummanyihiin, nidaamka isku imaatinka SMT PCB kuma koobna alxamarka iyo dhigista walxaha ama iskudhafka PCB.Nidaamka soo-saarka soo socda waa in sidoo kale la raaco.
1. mari mariinka Alxan
Tallaabada ugu horreysa marka la isku dhejinayo guddiga PCT-ga ee loo yaqaan 'SMT PCB' waxay adeegsaneysaa jumladda laydhka. Jinka waxaa lagu dabaqi karaa PCB iyada oo loo marayo tiknoolajiyada shaashadda xariirta. Waxaa sidoo kale lagu codsan karaa iyadoo la adeegsanayo stencil PCB oo loogu talagalay faylka wax soo saarka ee CAD oo la mid ah. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad jarto jaranjarada adoo adeegsanaya leysar oo aad ku marinayso koollada wax lagu dhejiyo qaybaha aad ka iibinaysid qaybaha. Codsiga Jinka Alxan waa in lagu fuliyaa jawi qabow. Markaad dhamayso dalabka, waxaad sugi kartaa xoogaa waqti ah kulanka.
2. Kormeerka koolladaada alxanka
Ka dib markii Jinka Alxan waxaa loo mariyey sabuuradda, tallaabada xigta waa in had iyo jeer laga hubiyo iyada oo loo marayo farsamooyinka kormeerka Jinka Alxan. Nidaamkani waa mid muhiim ah, gaar ahaan marka la falanqeynayo meesha uu ku yaal jooniska, xaddiga koollada loo isticmaalo, iyo dhinacyada kale ee aasaasiga ah.
3. Xaqiijinta geedi socodka
Haddii ay dhacdo in guddigaaga PCB uu adeegsanayo qaybaha SMT ee labada dhinacba, waxaa jiri doona baahi loo qabo in la tixgeliyo ku celcelinta isla nidaamka xaqiijinta dhinaca labaad. waxaad awoodi doontaa inaad la socoto waqtiga ugufiican ee aad ugu soo bandhigto xabagta alxanku heerkulka qolka halkan. Tani waa marka guddiga wareeggaagu uu diyaar u yahay in la soo ururiyo. Qaybaha ayaa wali diyaar u ah warshadda soo socota.
4. Qalabka Golaha
Tani waxay asal ahaan ka hadlaysaa BOM (Bill of Materials) oo ay u adeegsatay CM falanqaynta xogta. Tani waxay fududeyneysaa sameynta xirmooyinka isku imaatinka BOM.
5. Kaydinta xirmooyinka leh canaasirta
U isticmaal koodhka si aad uga soo saarto keydka oo aad ugu darto xirmada isku imaatinka. Markii qaybaha si buuxda loogu rakibay xirmada, waxaa loo qaadaa mashiin la soo qaado oo meel la yiraahdo teknoolojiyadda dusha sare.
6. Diyaarinta qaybaha meelaynta
Qalabka xulashada-iyo-meesha ayaa loo shaqeeyaa halkan si loogu qabto qayb kasta oo ka mid ah shirarka. Mashiinka wuxuu kaloo isticmaalaa kaydadka oo la socda fure u gaar ah oo u dhigma xirmada isku-xirnaanta BOM. Mashiinka waxaa loogu talagalay inuu u sheego qaybta uu kaydadka haysto.
Nidaamka isku imaatinka SMTwuxuu beddelayaa habka wax soo saarka PCB-ga oo wuxuu u qaadanayaa heerka ku xiga. Tani waa tikniyoolajiyad kharash-ool ah, hufan oo lagu kalsoonaan karo abuurista PCB-yada. Waxa kaliya ee laga filayo mustaqbalka waa dabcan hagaajinta dhammaan tiknoolajiyada SMT PCB maadaama aysan ahayn hawl fudud. Warka wanaagsani waa in xitaa maanta, waxaad ka heli kartaa looxyo PCB lagu kalsoonaan karo qiimo jaban. Si kastaba ha noqotee, waxaa habboon in lala xiriiro injineer la isku halleyn karo ama soo saaraha oo leh qalab iyo khibrad ku habboon si loo buuxiyo shuruudaha guddigaaga. Si lagaaga caawiyo inaad fahanto soo saaraha ugu fiican, waxaad had iyo jeer ka fiirsan kartaa adeegsiga qalabka casriga ah, qalabka heerka koowaad, qiimaha la awoodi karo, iyo soo saarayaasha wax ku bixiya waqtiga.
Himilada PCBFuturewaa in la siiyo warshadaha iyada oo la isku halleyn karo PCB horumarsan iyo adeegyo isugu jira min nooc ilaa wax soo saar qaab jaban. Ujeeddadeenu waa inaan ka caawinno isticmaale kasta inuu noqdo xirfadle sifiican loo soo koobay, oo ku takhasusay xirfado kala duwan oo si kalsooni leh u keeni kara fikradaha hal-abuurka leh ee injineernimada si loogu qaado tiro kasta oo ah howlaha la xiriira, dhibaatooyinka, iyo teknoolojiyada.